VIA Rail dia nahavita fifanarahana nifanaovana tamin'ny Unifor union
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-dalamby » VIA Rail dia nahavita fifanarahana nifanaovana tamin'ny Unifor union
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany Brezila • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fifanarahana an-tariby dia iharan'ny latsa-panamarinana ataon'ny mpikambana ao amin'ny VIA Rail's Unifor
VIA Rail Canada (VIA Rail) dia nahavita fifanarahana vonjimaika momba ny fanavaozana fifanarahana roa taona nifanaovan'ny Unifor, ny firaisambe izay misolo tena ny mpiasan'ny VIA Rail maherin'ny 2,400 amin'ny gara, amin'ny lamasinina, any amin'ny foibe fikojakojana sy birao fitantanan-draharaha.
Ireo fifanarahana tsy mitombina ireo dia iharan'ny latsa-bato alohan'ny VIA RailMpikambana Unifor.
"Faly izahay fa nahatratra ireo fifanarahana ireo ary miandrandra ny fankatoavana azy ireo," hoy i Patricia Jasmin, Lehiben'ny mpiasan'ny traikefa maharitra ho an'ny mpiasa. "Ity dingana mamporisika ity dia maneho ny fanoloran-tena sy ny asa mafy nasehon'ny roa tonta nandritra ity dingana ity."
Tamin'ny martsa 2020, noho ny Covid-19 Nipoaka ny VIA Rail ary Unifor nanaiky ny hanemorana ny fifampiraharahana ho an'ny fifanarahana iraisana, izay nifarana tamin'ny 31 Desambra 2019, niaraka tamin'ny Unifor 1 (mpiasan'ny fiarandalamby), Unifor 2 (mpiasan'ny fiarandalamby an-tsambo) ary Unifor 3 (mpiasan'ny fivarotana). Ny fizotry ny fifampiraharahana iraisana mahazatra dia nitohy tamin'ny Q4 2020.